Ihe mgbochi mmiri: Ihe nchịkọta data na-ejikarị eme ihe
Ọchịchọ maka ntaneti ntaneti na-amụba kwa ụbọchị n'ihi na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji otu ọtụtụ data maka nzube dị iche iche. Ngwakọta dịgasị iche iche na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ihe dị iche iche chọrọ nlekọta weebụ . N'ezie, ugbu a, enwere njedebe nke data mmịpụta mkpa. Iji gosipụta mkpa nke ozi nchịkọta, 7 a na-akọwa ihe ndị a na-ejikarị eme ihe nchịkọta data.
1. Nchịkọta Data site na PDF faịlụ
Ntuziaka nchịkọta data bụ maka ịnakọta ụfọdụ data sitere na PDF faịlụ ma na-agbanwe ya ka ọ bụrụ faịlụ dị mma. Nke ọ bụla n'ime faịlụ data echetara nwere ihe dị ka 15 ruo 20 isi ihe dị n'ihe dịka 5 ruo 15.
2. Na-ewepu ozi site na engines ọchụchọ na akwụkwọ ndekọ weebụ
Nke a bụ ihe nchịkọta data dị mkpa. Ọ na-achọ nchịkọta data site na engines ọchụchọ na ntanetịime weebụ ma tinye ya n'ime nchekwa data akọwapụtara.
3. Usoro nchịkọta Email na nkwenye
arịrịọ a na-ewepu data a chọrọ adreesị ozi-e, aha ụlọ ọrụ, nọmba ekwentị, obodo, na obodo ebe a ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ dị. A na-achọkarị ụdị ozi a maka ebumnuche ahịa. A ghaghị ikwenye ozi ahụ ma kwadoro ka ọ dịrị gị mfe. Enwere ike ịchọta ndepụta zuru ezu nke ụlọ ọrụ site na ndekọ aha, mana enwere ike inweta ozi ndị ọzọ site na ebe nrụọrụ weebụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ọ bụla.
4. Ndebanye aha Email
Ọrụ a bụ maka ikpokọta adreesị email nke ndị nwere ọwa YouTube. Enwere ike iji ya na ha ma ọ bụ n'ahịa ha ngwaahịa na ọrụ ha. A pụkwara iji ya mee nchọpụta dị mkpa.
5. Ndepụta nke ihe onwunwe niile na ebe a
Nke a nbudata weebụ a na - achọ iji nweta ndepụta nke nnweta ụlọ na ebe nrụọrụ weebụ kpọmkwem. Ọ bụ ezie na ebe nrụọrụ weebụ a na-edebe ihe nwere ndepụta nke nkwụ ụgwọ ụlọ n'ọtụtụ ebe, ọ bụ naanị ndị nọ n'otu ebe dị mkpa maka arịrịọ a. Kemgbe ihe dị ka afọ 1400 ruo 1650, edepụtara na ebe nrụọrụ weebụ, a ghaghị idozi ma chịchaa ndị achọrọ. Maka ụlọ ọrụ mgbazinye ọ bụla, ihe nkọwa achọrọ bụ nkọwa aha, aha, na nkọwa ndị nwe ụlọ. A ghaghị ịbupu data niile a kpụtara ga-esi n'ime ya dị ka akọwapụtara nke onye jụrụ ajụjụ ahụ.
6. Nkọwa kọntaktị nke ndị prọfesọ ego na United States
Ntuziaka nchịkọta data a bụ maka nyochaa site na weebụsaịtị nke mahadum nile na United States iji weghachite adreesị email na nọmba ekwentị nke ndị prọfesọ ego.
7. Nkọwapụta nke ndị ahịa ụgbọ ala UK
Ọrụ nchịkọta weebụ a bụ maka nchịkọta nke ndị na-ere ahịa ụgbọ ala UK ndị na-ahụ maka Audi na Nissan ụdị. Maka onye ọ bụla n'ime ndị na-ere ahịa, nkọwa a chọrọ bụ nọmba ekwentị, adreesị ozi-e, adreesị ozi-e, aha azụmahịa, na aha njikwa.
N'ikpeazụ, e nwere ọtụtụ narị nbudata ntanetị weebụ. Ndị edere n'elu bụ naanị ndị a na-ahọpụtaghị maka nzube nke ihe atụ Source .